China JY-1027 siri ike Silicone surfactant adjuvants maka ụlọ ọrụ agro-chemicals na ndị na-emepụta ya | Juyou
JY-1027 Solidact surfactant silicone maka agro-kemịkal
JY-1027 bụ alkoxy gbanwetụrụ siri ike polymeric trisiloxane, nke nwere ike gbasaa nke ukwuu. Ọ nwere ike ibelata nsogbu nke mmiri ịgba mmiri ka mma karịa ndị enyemaka groovy. Ọ nwere ike mee ka nsogbu ahụ daa n'ihe dịka 21 MN/m na mkpokọta 0.2%, mgbe Op-10 nwere ike ruo 30MN/m na mkpokọta 1%.
Dị ka surfactant nke na -agbasa nke ukwuu, ọ nwere ike belata akụkụ kọntaktị nke mmiri ịgba na ebe akwụkwọ ka iwelie elu mkpuchi. Kedu ihe ọzọ, ọ nwere ike ịkwalite nnabata nke pesticide site na spiracle. Osisi nwere ike itinye uche ya n'ụzọ dị mfe ma bụrụ onye na-eguzogide ọgwụ, iji meziwanye mmetụta ya.
Ike na -agbasa nke ukwuu na ịmị mmiri; Ọ dị mfe itinye na pesticide siri ike; Ịcoụ ọgwụ na-eguzogide; Meziwanye ịbanye; Melite ntụkwasị obi; Obere olu ịgba.
Maliteaagba:ntụ ntụ siri ike
Mkpa mpụta (0.2%): 20.5MN/m
Igwe ojii (0.2%): <10 ℃
A :) maka ngwa ngwa:
Enwere ike iji ihe mgbakwunye JY1027 ịgba dị ka ihe mejupụtara 1-10% na storo agrochemical. Ndị na-ahụ maka ọgwụ na-egbu egbu kwesịrị ịdabere n'ụdị na usoro dị iche iche iji mezie ojiji silicone nke JY1027 na-arụ ọrụ ugbo iji nweta nsonaazụ kacha dị ọnụ ahịa, tupu ojiji, nnwale nnwale na nnwale ubube ụgbọelu kwesịrị ime.
B :) pesticides siri ike/ntụ ntụ ：
WP/wettable ntụ ntụ 、 GR/granula 、 WDG/mmiri dispersibility granula 、 SP/soluble ntụ ntụ 、 onye na-eme ka mmiri ọgwụ ， usoro onunu ogwu dị ihe dịka 0.5-1% n'ịdị arọ.
Ngwugwu na njem
Ịchekwa ya na ndò, na-egbochi ihicha anwụ, ndụ shelf bụ afọ 2, na-ebuga ya dị ka ihe adịghị ize ndụ.
Nke gara aga: JY-1028 Silicone surfactant adjuvants maka kemịkal agro
Osote: JY-2123SSN ​​Defoamer Agriculture Industry